Iprimiy yomngcipheko eSpain namhlanje | Umngcipheko waseSpain | Ezezimali
Kweli phepha ungalandela ixabiso le Ipremiyamu yomngcipheko waseSpain umzuzu nomzuzu. Ixabiso leprimiyamu libonisa umngcipheko wokuba iimarike zezemali zizinike ityala lelizwe. Elikhulu elo xabiso, kokukhona likhula Iindleko zezemali ukuba ilizwe kufuneka lihlawule kwaye ngenxa yoko umngcipheko wokuchaphazeleka mkhulu.
Okwangoku i-premium yaseSpain yomngcipheko 107 amanqaku asisiseko.
Kwimeko yeSpain, ipremiyamu yomngcipheko ibalwa ngokusekwe kwipremiyamu yomngcipheko waseJamani, ke ixabiso lamanqaku angama-400 lithetha oko umahluko Phakathi kweJamani kunye neSpanish umngcipheko we-premium yi-400. Umzekelo, ukuba ixabisa iJamani i-1,3% ukuzixhasa kwaye i-Spain ine-umahluko wama-400 kwaye ke indleko yezemali eSpain yi-5,3%. Eli xabiso lifunyanwa ngokudibanisa i-130 + 400 = 530 (5,3% njengepesenti).
Iprimiyamu yomngcipheko idume ngokulusizi eSpain ngenxa ye- uxhuzulelo lwenkululeko zonyaka ka-2011 ezenze ixabiso lanyuka ngamanani angaphezulu kwamanqaku angama-500. Kule meko, ilizwe alinakho ukuzixhasa ngezemali kwiimarike, ngenxa yoko umngcipheko wokungagqibeki inkulu.